Orinasa fonosana fonosana fonosana sy mpamatsy Nitrile | kejia
Izy io dia vita amin'ny NBR amin'ny alàlan'ny dingam-pamokarana manokana. Voavaha ny olan'ny fonon-tànana PVC tsy misy vovoka sy fonon-tanana vita amin'ny latabatra ao amin'ny efitrano fanadiovana maoderina. Ny fonon-tanana Nitrile dia manana fahombiazana tsara fanoherana ny static, tsy misy alergie proteinina, ahazoana aina, mora alefa kokoa, diovina sy fonosina ao anaty efitrano tsy misy vovoka ny vokatra.
Ny fonon-tanana Nitrile dia tsy misy singa voajanahary latabatra, tsy misy fiatraikany amin'ny hoditra olombelona, ​​tsy misy poizina, tsy manimba, tsy misy tsirony. Drafitra voafantina, haitao mandroso, fahatsapana malefaka, fampandehanana manohitra skid, fandidiana malefaka. ny fonon-tànana nitrile dia mety amin'ny fizahana fitsaboana, fitsaboana nify, fanampiana vonjy taitra, fitaizana be antitra, famokarana elektronika indostrialy, kosmetika, sakafo ary famokarana hafa. Ny fonon-tànana mahatohitra menaka azota dia mampiasa teknolojia tsy misy vovoka manokana, izay miahy kokoa amin'ny fiarovana. Ny fananana miaro sy ara-batana dia tsara kokoa noho ny fonon-tanana vita amin'ny latex.
Mampiavaka ny fonon-tànana nitrile
1. Mahafinaritra ny mitafy, ny mitafy lava dia tsy hiteraka fihenjanana amin'ny hoditra, mahatonga ny lalan-dra.
2. Tsy misy fitambarana amino sy akora manimba hafa izy io, ary tsy mahazaka kely.
3. Fotoana fanimbana fohy, fitsaboana mora ary fiarovana ny tontolo iainana.
4. Tanjaka mahery, fanoherana ny puncture, tsy mora simba.
5. Fihenan'ny rivotra tsara, misoroka amin'ny fomba mahomby ny famoahana vovoka.
6. Fanoherana simika tena tsara, mahatohitra PH sasany; mahatohitra fanapoizinana hydrocarbon, tsy mora simba.
7. Silicon free, antistatic, mety amin'ny indostrian'ny elektronika.
8. Sisan-javatra simika ambany, ambany atiny ambany, atiny kely potika, mety amin'ny tontolo efitrano madio madio.
Mety amin'ny elektronika, simika, vera, fikarohana siantifika, sakafo sy indostria hafa, semiconductor; ny fonon-tànana mahatohitra menaka nitrile dia be mpampiasa amin'ny fametrahana fitaovana sy fitaovana elektronika marina, ny fiasan'ny fitaovam-by vita amin'ny vy, ny fametrahana sy ny fanesorana ireo vokatra avo lenta, mpamily kapila, fitaovana mitambatra, latabatra fampirantiana LCD, tsipika famokarana birao boribory, optique vokatra, laboratoara ary sehatra hafa.
loko fonon-tanana nitrile: fotsy / manga / mainty / manga maivana
Famaritana ny fonon-tànana nitrile: kely / salantsalany / lehibe / lehibe S / M / L / XL 9 mirefy / 12 santimetatra
Rantsan-tànana (rantsan-tànana antiskid) / rantsan-tànana (antiskid rantsan-tànana) / ankapobeny (Palm antiskid) /
Fonosana fonon-tànana nitrile: farantsa / kitapo 100, kitapo / boaty 10 (fonosana tsy miandany), farakodia / boaty, boaty 20 / boaty (azon'ny mpanjifa atao)
Teo aloha: Ireo mpamatsy malaza indrindra Sina Pleated Filter - Sivan-taratasy voalohany sivana voalohany - kejia
Manaraka: Fandroana rivotra